Na Teo Aza ny Fanafoanana, Mbola Be Fanantenana ihany Ny Mpanorina ilay Tranonkala Fanaovan-gazety Shinoa Nahazo Loka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2016 15:16 GMT
Huang Qi mankalaza miaraka amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo ao Tianwang taorian'ny nivoahany tany am-ponja tamin'ny 2011. Sary: Nomen'i Huang Qi.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Catherine Lai ary navoaka voalohany tao amin'ny Free Press tao Hong Kong tamin'ny 12 Novambra, 2016. Zaraina ao amin'ny Global Voices eo ambanin'ny fifanarahana fiarahamiasa ity dika eto ambany ity.
Na eo aza ny fitazonana mitohy ireo mpanao tatitra ao aminy ary rehefa nogadraina indroa, dia milaza ny mpanorina ny tranonkala fampahalalam-baovao 64 Tianwang fa hanampy ny fitomboan'ny fikambanana ilay fanafoanana.
Nanome ny Loka Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety ho an'ny 64 Tianwang ny Mpanao Gazety Tsy Voafefin-tSisintany (RSF) tamin'ny 7 Novambra izay ekena hatraiza hatraiza ho toy ny tranonkala mpiaro ny zon'olombelona ao Shina.
Tao anatina resadresaka nifanaovana tamin'ny HKFP, niteny i Huang fa fomba iray hanekena ny asan'ireo mpanao gazety mpilatsaka an-tsitrapo ilay maripankasitrahana, izay ny sivy amin'ireo dia voagadra ary ny dimy no navotsotra rehefa nandoa onitra, hoy ny Tianwang. Olon-tsotra enina mpanao gazetin'ny Tianwang no nogadraina noho ny fandrakofan'izy ireo ny fihaonana an-tampon'ny G20 tao Huangzhou tamin'ny Septambra. Iray tamin'izy ireo no mbola any am-pigadràna.
Mbola nanohy foana ny asany i Huang Qi sy ireo mpilatsaka an-tsitrapony na eo aza ny famoretana tsy mitsahatra.
Tamin'ny 1998, nanomboka tamina anarana hafa ny 64 Tianwang, toy ny orinasa iray nifantoka tamin'ny fanondranana olona, izay nofaritan'i Huang Qi mpanorina ny Tianwang ho ”olana goavana tamin'ny faramparan'ny taona 1990.” Napetraka tamin'ny taona manaraka izany ny tranonkala. Huang Qi, mponina tao Sichuan, no nanorina ny tetikasa niaraka tamin'ny ambim-bola avy amin'ny asany teo aloha amin'ny naha-mpandraharaha sy tompon'orinasa.
Niteny tamin'ny Hong Kong Free Press izy:
Raha nanampy ireo olona very, na tafasaraka tamin'ireo havan-tiany, na tsy hita izahay, dia nahita fa tao amin'ny tanibe, tao ambadik'ireo toejavatra ireo dia nisy kolikoly ara-pitsarana sy na fandikàna ny lalàna momba ny zon-olombelona, noho izany dia nitarinay ny asanay.
Indraindray, nahazoan'ny Tianwang fandrakofana miabo avy amin'ireo media mahazatra ny asa nataon-dry zareo, ahitana ny avy amin'ny People's Daily, izay gazety an-tsoratra ofisialy lehibe indrindra an'ny Antoko Kaominitsa Shinoa. Fa efa voatsikera tamin'ny tatitra nataony mikasika ny zon'olombelona ihany koa ry zareo.
Voagadra nandritra ny dimy taona i Huang noho ny fanankorontanana tamin'ny 2003 taorian'ny fampiantranoany tao amin'ny tranonkalany ireo lahatsoratra momba ny hetsika mpomba-demokrasia tamin'ny 1989 tao Shina izay niafara tamin'ny famonoana mahatsiravina tao Tiananmen. Mbola voagadra telo taona indray izy noho ny ”fananana tsiambaratelom-panjakana” taorian'ny nanadihadiany ny filazàna fa isan'ny tafiditra amin'ny nahafaty ireo ankizy mpianatra tao Sichuan nadritra ny horohorontany tamin'ny 2008 ny haratsian'ny asa fanorenana. Niteny izy:
Matahotra ny hiverina am-ponja ihany koa aho, fa olona maro no mijaly noho isika. Ary ny asanay dia afaka manampy hanamaivana ny fijalian'izy ireny […] Mino ihany koa izahay fa mba handroso mankany amin'ny demokrasia sy ny fanjakana tàn-dalàna amin'izay ny fiarahamonina Shinoa.
Amin'izao fotoana izao, tranonkalam-baovao tsy miankina izay mizara lahatsoratra sy vaovao mikasika ny tranga mahakasika ny zon'olombelona ao Shina ny Tianwang, ahitana ny fisamboran'ny polisy, fandravàna an-terisetra, fikatrohana ataon”ireo mpanagon-tsonia sy ny fihetsiketsehana.
Nitsangana mihitsy aza i Huang hatramin'ny fiarovana ny zon'ilay lehiben'ny fiarovam-bahoaka taloha nalàna baraka, Zhou Yongkangi, niantso ny manampahefana mba hiaro ny zony ary tsy hanao azy no mpisolo vaika ny ankàlana.
Manantena izahay fa ao an-tanibe Shina, hahazo tontolo iainana ara-pitsarana mitovy daholo ny rehetra, ary tsy hampiasa mizàna tsindrian'ila [izy ireo] mba hiatrehana ny manampahefana Sinoa.
Na voasakana ao Shina aza ny tranonkala, mieritreritra i Huang fa mbola mahita mpamaky ao an-toerana ihany izany. Niteny izy:
Manana karazana fitaovana maro ry zareo mba hialàna amin'ny sakana… ary manana ny fombany manokana fizaràny lahatsoratra.
Vahoaka Shinoa an'arivony maro no mamaky ny tranonkala, ary fikambanana mpiaro ny zo, haino aman-jery vahiny, sy ireo manampahefana ao amin'ny governemanta ary ny polisy – ny sasany miasa loha noho ilay tranonkala mitatitra ny fihetraketrahany ary ny hafa indray manantena ny hisian'ny fiovan'ny toedraharaha.
Rehefa nanontaniana raha natahotra izy hoe mety hiteraka fitomboan'ny fanafoanana ilay maripankasitrahana, hoy i Huang:
Tao anatin'ny 18 taona, niatrika fanafoanana isan-karazany izahay, fa tsy mba nilofika mihitsy. Mihevitra ihany koa izahay fa izany karazana fanafoanana izany dia fepetra ilaina mba hanampiana anay hivoatra sy hanampy anay hanatsara hatrany ny asanay.
Tao anatin'ny 18 taona, tsy nisy nanaiky ny hanao sonia fiaikenkeloka novolavolain'ny manampahefana ireo mpilatsaka an-tsitrapo 64 Tianwang […] Ny tena antony tsy nanaiken-dry zareo dia satria inoan'izy tenany fa mety ny zavatra ataony. Mifanaraka amin'ny voalaza ao amin'ny satan'ny Repoblika Entimb-bahoakan'i Shina izany fihetsiny izany, sy ny lalàna mifandraika aminy, ary ny fitsipik'i Xi Jinping momba ny fanjakana tàn-dalàna, sy ny fitsipiky ny fiarahamonina mirindra.
Niteny tamin'ny haino aman-jerim-panjakana izy tamin'ny 1999 fa mety ho lasa fikambanana haino aman-jery i Tianwang mitovy amin'ny Washington Post, ny Assiciated Press, Agence France-Presse, ary ny CNN.
Rehefa nanontaniana raha tratrany izany toerana izany, hoy izy:
Amin'izao fotoana izao, mbola tena tsy ampy, satria tsy ampy ny fitaovanay ary matetika izahay no midona aminà fanafoanana. Fa amin'ny ho avy, azo antoka tena hanao asa goavana izahay.
Huang manampy ireo trà-boina tamin'ny horohoronany tao Sichuan tamin'ny 2008. Sary: VOA.
Na teo aza ny fanafoanan'ny manampahefana ny asan'izy ireo, mbola be fanantenana ihany i Huang – amin'ny sasany, angamba, tafahoatra loatra tsy araka ny tokony ho izy. Manizingizina hatrany i Huang fa mihatsara ny toetry ny zon'olombelona ao Shina raha jerena ao anatin'ireo fironana midadasika ampitahaina amin'ny toedraharaha iainan'ny tsirairay, na niteny aza ireo fikambanana miaro zon'olombelona fa miharatsy ny toedraharaha eo ambanin'ny fitondran'ny filoha amin'izao fotoana izao Xi Jinping.
Niova be ny toedraharaha momba ny zon'olombelona ao an-tanibe Shina tato anatin'ny 18 taona… Mihevitra aho fa amin'ny farany – fara faharatsiny ao anatin'ny 8 na 10 taona – dia hahazo ny tena fahalalahana amin'ny asa fanaovana gazety i Shina.